Hayado ku casumay 11 jirro bacda galmada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hayado ku casumay 11 jirro bacda galmada
La daabacay fredag 22 mars 2013 kl 10.45
Shakhsi ka mid ah bulshada caadiga oo ka carooday ayaa dacwad ka dhan ah uga gudbiyay maamulka hoggaanka bulshada (Socialstyrelsen) qorshihii afarta hayad-goboleed ee waqooyiga dalka, midkaasina oo la xiriirey iney si bilaash ugu casumeen qoraal dhanka aaladda internet-ka ey ku daabaceen bacda galmada waxa afkan lagu yiraahdo Kondom dhallaanka illaa da'da 11 jir ugu hooseeyso. Waana mid dhiiri-gelineeysa falalka galmada aan xeerka waafaqsaneyn ee dhallaanka.
Sida uu shakhsigu ku qoray dacwadiisa inay tallaabooyinka lagu casumey bacaha galmada dhallaan da'doodu tahay 11-jir oo aan weli kala saarin jinsigooda ay tahay mid aan xeerka waafaqsaneyn, isla-markaana laga yaqyaqsoodo.
Hayad-goboleedyada ayaa casumaaddooda ciddii doonaysa iney wax ka hesho ey waajib ku tahay iney foom ku buuxiyaan aaladda internet-ka waxyaalo ey ka mid yihiin magaca, da'da iyo cinwaanka ey deggen yihiin. Dadyoowgaa ayey da'doodu u dhexeeysaa 30 iyo wixii ka weyn illaa iyo 11-jir.
Goolka ey hayad-goboleedyadu ka lahaayeen qorshahan ayaa ahaa sidii loo dhimi lahaa cudurrada galmada ku faafa, sida uu boggiisa internet-ka ku qoray war-geeyska Allehanda.